Ọchụ ndi na-achị ehi na-egbu: Buharị agaghị enweta nkwado ndi Tiv na 2019 – hoo!haa!!
Otu jikọtara ndi Tiv a na-akpọ Tiv Area Traditional Council, TATC, agwala Onyeisiala Muhammadu Buhari na ọ gaghị enweta otu mkpụrụ mbinye aka na Benuwe Steeti n’afọ 2019. Ha sịrị na ” ọ bụrụ na ọdịnihu ya banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị di ya mkpa” ya mara ihe o mere iji kwụsị ogbugbu ndi Fulani na-achi ehi na-egbu ndi steeti ahụ
Ha kwuru nkea mgbe ha jụrụ atụmatụ Gọọmentị Etiti ihiwe ọgbọ ehi ha kpọrọ cattle colony na akụkụ dị iche iche n’ala a.
N’okwu ya ụbọchị Tuuzdee, Onye ndụmọdụ iwu nke otu ahụ, Ichie Edwọọdụ Ashiekaa, kọwara na ha ejikerela iwopu okwu ahu n’ihu mbauwa nakwa ụlọikpe arụrụala mbaụwa (International Criminal Court).
Ashiekaa kwuru sị, “N’ezie, Buharị bụ onye Fulani, o nwekwara ehi. Mana ọ bụrụ na ọdịnihu ya banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị di ya mkpa, ya gbaa mbọ mara ihe o mere iji kwụsị ogbugbu a maka na ndi Benuwe binyere aka nke ukwuu na’afọ 2015. Ugbua, ọ zọọ ọzọ n’afọ 2019, ọ gaghị enweta otu mkpụrụ mbinye aka na Benuwe Steeti.
“Iwu machibidoro ịchịgharị ehi adiwo ire, onye ọbụla ga erubelatara ya isi. Iwu ahụ chekwabakwara ndi nwe ehi n’aka ndi ohi ehi site na ịmapụta ntaramahụhụ tara akpụ maka nkea mana ndi na-achi ehi eforola ntụtụ taa na ha ga-emebi ya bụ iwu”
“O ruola mgbe ndi mbaụwa ga-abata n’okwu a. Anyị ga-aga n’Ụlọ nnọchiteanya mba di iche iche (Embassies), otu mbaụwa (UN) nakwa ụlọikpe Arụrụala mbaụwa (ICC). Anyị ejighi udiri ngwa agha ndi a ji, ndi be anyị bigasị n’ime obodo enweghi ike ibusonwu ha agha mana anyị ga-enwe mmeri n’ogo ogo mbaụwa nakwa nke Gọọmentị Etiti”
Ashiekaa kọwakwara na Gọọmenti Etiti enweghị ikike ọbụla ịkagbu iwu Gọọmentị Benuwe Steeti meere onwe ya dịka o siri dị n’iwuala Naịjiriya
Previous Post: NWA/NWATA
Next Post: ỌKỤ